बिचित्र संसार – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १७:१० English
चन्द्रमाको ढुंगा पृथ्वीमा ल्याउने चीनको योजना ८ मंसिर २०७७, सोमबार १५:२३
कुर्सीबाट लडेर पूर्वगाविस अध्यक्षको मृत्यु ७ मंसिर २०७७, आईतवार ०८:२७
दाङमा कुर्सीबाट लडेर पूर्वगाविस अध्यक्षको मृत्यु भएको छ । शनिबार साँझ ५ बजेतिर कुर्सीबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका तत्कालीन उरहरी गाविस अध्यक्ष रेशमबहादुर भण्डारीको उपचारका क्रममा राति ११ बजेतिर मृत्यु भएको हो । कुर्सीबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका तुलसीपुर..
धौलागिरी अस्पतालमा शरीर जोडिएका शिशु जन्मदै मृत ३ मंसिर २०७७, बुधबार १३:११
धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा शरीर जोडिएका (कन्ज्वाइन्ड टुइन्स) दुई शिशुको जन्म भएको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–२ कुर्घाकी २८ वर्षीय अनिता विकले मंगलबार धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा शरीर जोडिएको दुई बच्चालाई जन्म दिनुभएको हो । पर्वत अस्पतालबाट बिहान ४ बजे रिफर भएर अस्पताल आएकी विकले..
चिनियाँ व्यापारीले १६ लाख युरोमा खरिद गरे एउटा परेवा २ मंसिर २०७७, मंगलवार ११:०१
काठमाडौं । एउटा परेवाको मूल्य कति होलो ? ५ सय वा बढीमा १५ सयसम्म हुन सक्छ । तर आम नेपालीको बुझाई विपरित बेल्जियमको एउटा रेसिङ परेवाको (परेवा उडाउने प्रतिस्पर्धामा सामेल गरिने परेवा) दाम सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यही हो जुन परेवालाई १६ लाख युरोमा बिक्री गरिएको छ ।..
एक जना पुरुषको १३ श्रीमति, सबै गर्भवती १ मंसिर २०७७, सोमबार १०:५१
एजेन्सी । नाइजेरियाका एक नागरिकले १३ जना श्रीमतिसंगै संगै बसेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् । अझै रमाईलो कुरा १३ जना श्रीमति गर्भवती भएका छन् । सबै पत्नीहरुको बच्चा जन्माउने मिती तीन देखि पाँच हप्ताको अन्तर रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ । अझ रमाईलो कुरा त सबै..
कुखुराको आक्रमणबाट प्रहरीको मृत्यु १ मंसिर २०७७, सोमबार १०:४९
फिलिपिन्समा आयोजित गैरकानुनी ‘भाले (कुखुरा) जुधाइ’ खेल रोक्न खोज्दा एक प्रहरी अधिकारी भालेको आक्रमणबाट मारिएका छन् । उत्तरी समार प्रान्तका प्रहरीका अनुसार लेफ्टिनेन्ट क्रिस्टियन बोलोकलाई भिडन्तका लागि भाले कुखुराको खुट्टामा बाँधिएको फलामको धारिलो वस्तुले लागेको थियो..
चिकनको चर्चा सुन्नेबित्तिकै आयो होश १ मंसिर २०७७, सोमबार १०:४८
खाना तपाईंलाई मनपर्ने छ भने मुखबाट पानी आउनु स्वभाविक नै हो । तर खानाले कोमामा भएका मानिस नै जागेको कुरा त सायदै सुन्नुभएको होला । तर वास्तवमा नै एउटा यस्तै घटना घटित भएको छ । ताइवानमा । त्यहाँ मनपर्ने खानाको कुरा गर्नाले युवक कोमाबाट बाहिर निस्किएका छन् । ६२ दिनसम्म कोमामा रहने १८..
जनकपुरमा एक महिलाले जन्माइन् ४ बच्चा १७ भाद्र २०७७, बुधबार १४:२२
धनुषा । धनुषामा एक मुस्लिम महिलाले चम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् । विदेह नगरपालिका सात जोगियाराकी २२ वर्षीया अरमाना खातुनले मंगलबार साँझ काव्या अस्पतालमा चार शिशुलाई जन्म दिएकी हुन् । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक सोनिया सिंहले चार बच्चा जन्मनुलाई दुर्लभ घटना बताएकी छन् ।..
जन्मेदेखि १८ वर्षसम्म सुतेको सुत्यै १६ भाद्र २०७७, मंगलवार १७:५१
पर्वत । यहाँको एक विकट गाउँका १८ वर्षीय किशोर जन्मेको १४ दिनदेखि अहिलेसम्म सुतेको सुत्यै छन् । शुरुमा मेनेन्जाइटिस (मस्तिष्कको झिल्ली गम्भीर तरिकाले सुनिने रोग) बाट ग्रसित कुश्मा नगरपालिका–१२ ठुलीपोखरीका सन्दीप लामिछाने चौबीसै घण्टा सुतेर जीवन बिताइरहेका छन् । उनको हातखुट्टा,..
बाँदरलाई हानेको गोली लागेर बालकको मृत्यु १३ भाद्र २०७७, शनिबार २०:०४
बाँदरलाई हानेको भरुवा बन्दुकको गोली लागेर यहाँ एक बालकको मृत्यु भएको छ । ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–४ जलेश्वरीका २३ वर्षीय मानकाजी तामाङले बाँदरलाई हानेको भरुवा बन्दुकको गोली लागेर सोही स्थानका १२ वर्षीय शैलेन्द्र तामाङको मृत्यु भएको हो । घरबाट करिब एक किलोमिटर उत्तरमा रहेको..
पाकिस्तानमा भाले हिरासतमुक्त २७ श्रावण २०७७, मंगलवार १६:४१
इस्लामावाद । पाकिस्तानमा एउटा कुखुराको भाले ८ महिनापछि प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएको छ । पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त जिल्लाको घोटमीमा स्थानीय अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहेको भालेलाई रिहा गरेर उसको मालिकलाई बुझाइदिन आदेश दिएको छ । सिन्धको दुईवटा थानामा ५ वटा कुखुराका भोलि प्रहरीको..
दुनियाँको पहिलो विमान रावणले उडाएको श्रीलंकाको दाबी १० श्रावण २०७७, शनिबार ०१:५९
कोलम्बो, (एजेन्सी)। भगवान रामको जन्मस्थान अयोध्या नेपालमा पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाबी गरेसँगै राम जन्मभूमिका विषयमा नेपाल र भारतमा गरमागरम बहस चलिरहेको छ । चर्काचर्कीको यो माहोलमा रामायणको अर्को पात्र रावणको जन्मभूमि श्रीलंका समेत थपिएको छ । विश्वमा पहिलो पटक राइट..
विश्वकै दुर्लभ सर्प राजगोमन कास्कीमा भेटियो ३१ असार २०७७, बुधबार ०९:३३
कास्की, ३१ असार । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकमा विश्वमै दुर्लभ प्रजातिमा पर्ने सर्प राजगोमन ‘किङ कोब्रा’ भेटिएको छ । घाचोकको टुटुङ्गास्थित स्वास्थ्यचौकी नजिक देखिएको सर्प किङकोब्रा रहेको पुष्टि भएपछि संरक्षणका लागि अहिले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना..
आफन्तले मृत्यु भनिएका बिरामी निको भएर फर्किए २४ असार २०७७, बुधबार ०८:२६
चितवन, २४ असार : उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भनिएका व्यक्ति मङ्गलबार निको भएर घर फर्किएका छन् । स्थानीय चितवन मेडिकल कलेजले उपचारमा लापरवाही गरी ती व्यक्तिको मृत्यु भएको भनी आफन्तले कलेज तोडफोड गरेका थिए । भरतपुर महानगरपालिका–२२ का १८ वर्षीय आशिष विक निको भएपछि मङ्गलबार..
खुल्यो आइफेल टाबर १२ असार २०७७, शुक्रबार ०३:१८
पेरिस, ११ असार (एएफपी) । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण मार्चदेखि बन्द रहेको आइफेल टाबर १०४ दिनपछि पहिलोपटक बिहीबारदेखि पुनः खोलिएको छ । विश्वभरका पर्यटकका लागि आश्चर्य र प्रमुख आकर्षणका रुपमा रहेको आइफेल टाबर अझै केही समय पर्यटकका लागि खुला नगरिने जनाइएको छ । बिहीबार पत्रकार र..
क्वारेन्टिनमै जन्मियो शिशु ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०८
प्युठान, ३१ जेठ । प्युठानको एक क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी गर्भवतीले शिशुलाई जन्म दिनुभएको छ । नौवहिनी गाउँपालिका – ७ स्थित नेरा आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्दै आउनुभएका १८ वर्षीया सरस्वती पुनले गए राति शिशुलाई जन्म दिनुभएको हो । श्रीमान् प्रेम पुनका साथमा यही जेठ १७ गते..